Blog von vzo_team@conferen.do - Burmese language / Free Video Chat Conferendo hug the world Community
← VZOmobile 1.4.1. Zurück zu Blog Встречайте обновленный VZOChat… →
ကျေးဇူးတင်ပါ တယ် ခင်ဗျား။
How can we do to see burmese language in vzo software? We can't see burmese language in language box like settings>languages>russian. just answer us how to see burmese language in vzo software, please.
How can we do and use, please, please
2 m2k123click on the Burmese flag at the top of this page
အခုလို့မြန်မာလို့ ဖတ်ရအောင် လုပ်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်များ
အင်္ဂလိတ်လိပ်လို ဘာတွေ ရေးမှန်းမသိတဲ့ Add Comment အပေါ်က စာမပါရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော် ဆရာ
It was great to see burmese font on the web and thankful for that.. But I can't see burmese font on the software that I download on my computer..It only allow English, German, Hungarian and Russian.. The Burmese font are show error .. sample as ..????????... If anyone fixed this problem I will be gladly thanks for that..
Soon, we will fix that burmese font problem in VZOchat application. Thanks.
သိပ်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပေါ့ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.... ခုလိုမြန်မာဘာသာနဲ့မြင်ခွင့်ရတာကျေးဇူးပါ... မြန်မာဘာသာနဲ့မြင်လို့ရတဲ့ဆိုဒ်ကရှားတယ်လေ....
VZO က ဗမာပြည်မှာ အလွန်အင်မတန်ကျော်ကြားတဲ့ application ဖြစ်နေတော့ ဗမာပြည်အပြင်ဘက်မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရောက်ရှိနေတဲ့ ဗမာပြည်သားများလဲ vzo ကို သုံးပြီး ဗမာပြည်နဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားရပါတယ်။ Windows အဖုို့ VZO က ပြောစရာမလိုပေမဲ့ Mac OS အတွက် ပါထွက်ပေးရင်သိပ်ကောင်းမှာဘဲ။ ကျွန်တော့်မှာ ဒီ vzo ကိစ္စလေးကြောင့် Mac OS ကို boot camp ကနေ Windows တင်ထားရပါတယ်။ ကြိုးစားပြီး Mac OS အတွက်ပါ ထွက်ပေးနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲလို့ အကြံပေးမျော်လင့်မိပါတယ်.
Ko aunglin ရဲ့  အကြံပြုချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ team ကြိုးစား ကြည့်ပါဦးမယ် ခင်ဗျာ.. m2k123
Burmese language ပါတာကိုဘယ်မှာဒေါင်းရမလဲဗျ
Bitte anmelden oder registrieren zu:Bild in voller Nutzer-Profil;neue Freunde finden;Kommentare schreiben;Eine persönliche Nachricht senden.